Man United iyo Chelsea oo ku daggaalamaya xiddig muhiim ka ah Juventus – Gool FM
(Turin) 23 Juun 2022. Manchester United iyo Chelsea ayaa si weyn ugu daggaalamaya xiddig muhiim ka ah kooxda Juventus, inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaagan.
Xiddiga reer France ee Adrien Rabiot ayaa ku dhaw in uu soo gaba gabeeyo mustaqbalkiisa kooxda Juventus, xilli ay xiiso u qabaan kooxo badan oo ka ciyaara horyaalka Premier League.
Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska The Sun ee dalka England, Chelsea ayaa ku biirtay Manchester United halganka loogu jiro saxiixa Adrien Rabiot.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in tababaraha Jarmalka ah ee Thomas Tuchel, uu si toos ah ula xiriiray ciyaaryahanka reer France isbuucaan, si uu ugu dhiirigeliyo inuu dhameystiro ku biiristiisa kooxda Blues.
Wargeyska Ingiriiska ayaa tilmaamay in tababaraha cusub ee reer Holland ee Manchester United Eric Ten Hag, uu doonayo inuu la soo saxiixdo ciyaaryahan khadka dhexe ah kaddib bixitaankii Paul Pogba.
Warbixinta ayaa xaqiijisay in Rabiot uu bar-tilmaameed u yahay Manchester United, hadii ay dhacdo inay ku guuldarreysato heshiiska ciyaaryahanka Barcelona ee Frenkie de Jong.
Adrien Rabiot waa 27 jir, wuxuuna ku fiican yahay ka ciyaarista khadka dhexe, qandaraaskiisa Juventus wuxuu dhacayaa June 2023.
Xiddiga reer France ayaa u soo dhaqaaqay Juve 2019 isaga oo kaga soo biiray Paris Saint-Germain, tan iyo markaas wuxuu u ciyaaray 129 kulan, tartamada oo dhan ah, isaga oo dhaliyay 6 gool, wuxuuna caawiyay 6 gool kale.
Halyeey Man City ah oo uga digay Sterling inuu ku biiro Chelsea